Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCharlotte Et Olivier
Ebekwe encotsheni yenduli kufuphi ne-oppidum ye-impernal ejongene neLoti, amanyathelo ambalwa ukusuka kwiindonga ezinqatyisiweyo, iintsalela zedabi lokugqibela le-Gallic Wars (isihlalo sase-Uxellodunum)
Igumbi lobomi elinenxalenye yegumbi lokuhlala-ukuhlala, isidlo sekona, ikhitshi elixhotyisiweyo livuliwe. Inqanaba -1 (ubude be-198cm yesilingi): Amagumbi okulala angama-2, okokuqala ngebhedi eyi-140cm kunye nenye enebhedi 140cm + 1 ibhedi 90cm; indlu yangasese eyahlukileyo, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nesinki ephindwe kabini ... Umhlaba ongabiyelwanga ngamaplanga, ifenitshala yegadi, iparasol, ibarbecue.
4.85 · Izimvo eziyi-54
Kwiindawo ezikhethekileyo, ezibekwe kwi-2ha enemithi, le ndlu ene-atypical facade, iya kuba yindawo yakho yokuhlala elandelayo: ukuphumla kunye nokuqhawulwa!
Ifakwe kwindawo yendalo ekhuselweyo unokonwabela ukuhamba okuninzi okanye ukukhwela ibhayisekile .. Uya kunandipha isiseko solwandle seCaÏx 5 imizuzu, iGreen Lake Catus okanye i-shellfish beach yase-Albas ngaphakathi kwemizuzu eyi-15 ngemoto, kunye nazo zonke iivenkile kunye neenkonzo ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Charlotte Et Olivier
Indlu yethu ngamanyathelo ambalwa ukusuka kwindlu kwaye ikuvumela ukuba uphendule naziphi na izicelo zolwazi okanye iingcebiso
UCharlotte Et Olivier yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Luzech